Ixesha kunye nabahlobo 31
Ngaba kunokwenzeka kwaye kulungile ukujonga kwixesha elizayo kunye nokuqikelela iimeko ezizayo?
Kuyenzeka kodwa kunqabile ilungelo lokujonga kwikamva. Ukuba kunokwenzeka kungqinwe kumaphepha amaninzi embali. Malunga nokulunga kwayo kufuneka kugqitywe kukuqina komzimba kunye nokugweba okuhle. Umhlobo akanakucebisa omnye ukuba azame ukujonga kwikamva. Umntu ojonga kwikamva alilindi ukululekwa. Ujongile. Kodwa kwabo bajonga kwikamva, bambalwa abayaziyo into abajonga kuyo. Ukuba bayakhangela kwaye babone, kuxa ikamva sele lihambile kuphela apho bayazi into abayibonileyo xa bejonga. Ukuba umntu ubona kwikamva ngokwendalo, akukho monakalo othile ekuqhubekeni kwakhe nokujonga, nangona bambalwa abakwaziyo ukufumana izibonelelo zomsebenzi. Ubungozi buza phantse ngokungaguquki ekuqikeleleni oko umntu ojonga ukuba ucinga akubona.
Ukuba umntu ujonga okanye ubona kwixa elizayo wenza njalo ngeempawu zakhe, oko kukuthi, amandla akhe obuchwephesha; okanye amandla akhe, oko kukuthi, amandla okusebenza kwengqondo; kwaye akukho bungozi bumbi bokwenza oko, ngaphandle nje kokuba eso silingo sokuxuba umhlaba awubonayo neli lizwe lendawo ebonakalayo. Xa azama ukuqikelela izigigaba zeli lizwe kwinto ebonakalayo kwelinye ilizwe, uyabhideka; ayinakukwazisa oko ikubonileyo ikulungele kwindawo yayo kwikamva leli; kwaye kunjalo nangona ebone ngokwenyani. Iingqikelelo zakhe azinakuxhomekeka xa zisetyenziswa kwizigigaba ezizayo kweli lizwe, kuba azenzeki njengoko bekuxelwe ngexesha, okanye ngendlela, okanye kwindawo. Lowo ubona okanye ozama ukubona ikamva ufana nosana olubona okanye luzama ukubona izinto ngalo. Xa umntwana ekwazi ukubona, kuyonwabisa kakhulu, kodwa kwenza iimpazamo ezininzi ekuqondeni nasekugwebeni ngento ayibonayo. Ayibuxabisi ubudlelwane okanye umgama phakathi kwezinto. Umgama awukho kulusana. Iya kuzama ukuyiqonda i-chandelier ngokuzithemba okukhulu njengoko ibamba impumlo kanina kwaye ingaqondi ukuba kutheni ingafikeleli kwi-chandelier. Umntu ojonga kwixesha elizayo ubona izigigaba neminqweno esele iza kwenzeka, kuba akanakho ukugweba malunga nobudlelwane phakathi kwento ayayibonayo kwihlabathi awayibonayo, kunye nomhlaba wenyama, nangenxa yokuba engakwazi qikelela ixesha lehlabathi lendalo enokwenzeka ngalo ngokunxulumene nomcimbi awayejonge kuwo. Uninzi lwezinto ebezixelwa kwangaphambili ziyenzeka, nangona zingasoloko ziqikekile njengoko kwakuqikelelwe. Akukho bulumko, ke ngoko, ukuba abantu baxhomekeke kuqikelelo lwabo bazama ukukhangela kwikamva ngokusebenzisa i-clairvoyance okanye ezinye iimvakalelo zangaphakathi, kuba abanakutsho ukuba loluphi uqikelelo oluchanekileyo.
Abo baxhomekeka kuqikelelo oluvela kwinto ebizwa ngokuba "kukubhabha ngaphakathi" okanye "ukukhanya kwamehlo," baphulukana nelinye lamalungelo abo abalulekileyo, oko kukuthi, izigqibo zabo. Kuba, nangona zininzi iimpazamo umntu anokuzenza ukuzama ukugweba izinto kunye neemeko, uya kugweba ngokufanelekileyo ngokufunda, kwaye ufunda ngeempazamo zakhe; lo gama nje efunda ukuxhomekeka kolunye uqikelelo, akasayi kuba nesigwebo esifanelekileyo. Lowo uxela kwangaphambili iziganeko zekamva azinasiqinisekiso sokuza ngokwenyani njengoko bekuxelwe kwangaphambili, kuba ingcinga okanye ubume ekwenziwa ngabo isibhengezo sangaphambi kwexesha azihambelani nezinye iimvakalelo okanye ubuhlakani. Ke umntu obona kuphela okanye ova kuphela, kwaye engafezekanga, kwaye ozama ukuqikelela akubonileyo okanye akuvileyo, unokuchaneka ngandlela ithile, kodwa adideke abo baxhomekeke kwisimaphambili sakhe. Ekuphela kwendlela eqinisekileyo yokuxela kwangaphambili yeziganeko zexesha elizayo ngulowo uxela kwangaphambili ukuba amandla akhe obuchule okanye ubuchule bakhe buqeqeshiwe; Kwimeko apho ingqondo nganye okanye ubuhlakani bayo buya kunxulumene nezinye kwaye zonke ziya kwenziwa zigqitywe ngendlela yokuba zisetyenziswe ngokuchaneka okungaphezulu njengaleyo indoda iyakwazi ukusebenzisa iimvakalelo kwisenzo sayo kunye nolwalamano lweli lizwe elibonakalayo.
Elona candelo libalulekileyo lombuzo ngu: Ngaba ilungile? Kwimeko umntu ayilunganga, ngoba ukuba umntu uyakwazi ukusebenzisa iimvakalelo zangaphakathi kwaye azinxibelelanise neziganeko kunye neemeko zehlabathi, oko kuya kumnika isibonelelo esingalunganga kubantu ahlala phakathi kwabo. Ukusetyenziswa kweempawu zangaphakathi kuya kwenza ukuba indoda ibone okwenziwe ngabanye; ukubona okuya kuthi ngokuqinisekileyo kuzise iziphumo ezithile njengokuphoswa kwebhola emoyeni kuya kubangela ukuwa kwayo. Ukuba umntu wayibona ibhola iphoswa kwaye wakwazi ukulandela ujikelezo lokubaleka kwayo, kwaye enamava, unokuqikelela ngokuchanekileyo ukuba iyokuwa phi. Ke, ukuba umntu angasebenzisa iimvakalelo zangaphakathi ukubona oko sele kwenziwe kwintengiso yesitokhwe okanye kwisangqa zentlalo okanye kwimicimbi yombuso, uyakuyazi indlela yokuthatha ithuba elingalunganga kwento eyenzelwe ukuba yabucala, kwaye wayenakho ukuyila Izenzo zakhe njengokuzixhamla okanye kwabo wayenomdla kubo. Ngale ndlela wayeya kuba ngumlawuli okanye umphathi wezinto kwaye wayenakho ukusebenzisa kwaye alawule abanye ababengenagunya njengaye. Ke ngoko, ngaphambi kokuba ilunge into yokuba indoda ijonge kwikamva kwaye ichaze izigigaba zekamva ngokuchanekileyo, imele ukuba yoyisile inkanuko, umsindo, intiyo kunye nokuzingca, inkanuko yeemvakalelo, kwaye kufuneka ingaphazanyiswa yile nto ibonayo kwaye ixele kwangaphambili. Umele akhulule kuwo wonke umnqweno wokuba nezinto okanye ukuzuza izinto zehlabathi.